နောက်ကားဖြစ်တဲ့ ဒင်းက ဒီကနေ့မှာတော့ ရှေ့ကားကိုတိတိကျကျကျော်တတ်သွားပီ. ဒီကောင်တော်တော်ပျော်နေမယ်ဆိုတာ ဓါတ်ပုံထဲကရုပ်ကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်. ညီမလေးစံစံလည်း အရမ်းပျော်နေမှာပါ. သာယာအေးချမ်းတဲ့မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ကြပါ. တူ/တူမလေး ချီချင်တယ် မြန်မြန်မွေးကြပါ.အိမ်ထောင်ကျပီဆိုတော့ အရင်လိုငါတို့နဲ့ဆုံဖို့ ပိုခက်ပီပေါ့.(ကောက်ကြီးနဲ့ထူးကျော်တုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲ).ချောက်မြို့မှာရိုက်ကူးရေးကပြန်လာမရလို့ ဒီနေ့ပွဲကိုမလာနိုင်တာကိုနားလည်ကြပါ. ၉ ရက်နေ့မှ တွေ့ကြမယ် ညီလေးနဲ့ညီမလေးရေ.၂ယောက်စလုံး ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းကြပါစေ Super CONGRATULATIONS 🎊
ကဲ…သက်အောင်ရဲ့ပရိသတ်တွေလည်း အဆိုတော်သက်အောင်နဲ့ မစံထက်အောင်ဝင်းတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးအတွက် ဂုဏ်ပြုစကားလေးပြောပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။We Love Cele
အကယ်ဒမီက ကျနော်တို့နဲ့ မဆိုင်သလိုပါပဲဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဇော်ဝင်းနိုင်
သားသားရဲ့ (၂) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲလေးကို မိသားစု (၃) ယောက်တည်း ကျင်းပခဲ့တဲ့ သင်ဇာနွယ်ဝင်း